IMNOGLU 5 District nke IMM President - RayHaber jere ije
[21 / 08 / 2019] Oge nkwụsị 10 n'etiti nnukwu Samandira	34 Istanbul
[21 / 08 / 2019] Egwuregwu Luwa na Ragbọ Ọsọ Meetwa na-ezukọ na Quail	1 America
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulOnye isi obodo IMMoglu 5 jere ije
Onye isi obodo IMMoglu 5 jere ije
14 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, Foto, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey 0
ibb president imamoglu lere agbata obi
Onye isi oche nke EkBB Ekrem İmamoğlu jere ije na ngụkọta oge 5 agbata obi site na nzọụkwụ. Ogige Archaeological si Aksaray Underground Bazaar, Yenikapi Security Monitor Center, Golden Horn Metro Bridge ruo ebe nlere anya dị n'ọtụtụ ebe. Imamoglu rụghachiri arụmọrụ ebe a na-egwu plastik na Archaeological Park. Lee, ọ nọ n’ime ogige ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-etinye obodo Anatolia, ndị mmadụ nwere isi. Onweghị ihe ihere dịka itinye ihe ebe a. Onye ọ bụla na-eme nhọrọ ndị a, anyị ga-agbanwe nke a kpamkpam. Nke a bụ n'ihu igwe. Echere m na ọ nweghị onye mere ogologo oge. Yabụ ọ nweghị onye ọrụ, 'Ihe dị m gburugburu adịghị' ọ leghị anya. Nke mbu, ndi mmadu na-amalite site na gburugburu ha. Ma agwaetiti a, site na ụkwụ, na-enwe mmetụta. Ọ sịrị, "Ruo ugbu a,"
Ekrem İmamoğlu, onye isi obodo Istanbul Metropolitan Municipality (İBB), malitere ngbanwe ya n'ụbọchị nke atọ nke ezumike n'ụlọ etiti dị na Saraçhane. Imamoglu, onye rụrụ ọrụ n'ọfịs nwa oge, hapụrụ IMA n'etiti ehihie ya na nwa ya nwoke Semih na ndị nnọchi anya ya. Imamoglu sochiri onye isi ndị odeakwụkwọ IMM bụ Murat Kalkanlı, Orhan Demir na Murat Yazıcı na onye isi Ngalaba Rail Systems Pelin Alpkökin. Imamoglu onye gbadoro isi na Aksaray site na Archaeological Park, enweghị afọ ojuju ahụ. A ga-atụgharị ogige a mgbe ochie a na-eme njem, gezi İmamoğlu gwara ndị ọrụ ya wee sị, gerekiyor Ọ dị mkpa iji mee ka ndị mmadụ gaa ma hụ ebe a na-ahụ maka ihe mgbe ochie. Anyị chọrọ ka emee ka ebe ndị a dị ọhụrụ ma tinye ha na sistemụ ozugbo. Lee anya na nke a, ọ bụ nnukwu mpaghara. Aga m ekwu, lee ma ọnọdụ a dị ebe a bụ ihe banyere ogwu ma ọ bụ ihe nchedo ahụ. Anyị ga-agwa Mahir Bey, onye isi Ngalaba Akụ nke Omenala anyị, m wee kwuo, sị, lee nke a. ”
NE Ihe bu ihe di n’ime olile anya adighi anya D
Imamoglu kwuru na ya ahụla ebe egwuregwu plastik emere ụmụaka maka ala ndị dị n'obodo ahụ. Lee, ọ nọ n’ime ogige ahụ. Ọ bụrụ na ọ ga-etinye obodo Anatolia, ndị mmadụ nwere isi. Onweghị ihe ihere dịka itinye ihe ebe a. Ha tinyezị tinye aka na Golden Horn, ọhụụ, na ọhụụ. Emere ya tupu ntuli aka. Oge izu 2 mgbe ntuli aka ahụ etinyere ndị otu egwuregwu. Onye obula mee nhọrọ ndi a gha agbanwe nke a kpamkpam. Nke a bụ n'ihu igwe. Echere m na ọ nweghị onye mere ogologo oge. Yabụ ọ nweghị onye ọrụ, 'Ihe dị m gburugburu adịghị' ọ leghị anya. Nke mbu, ndi mmadu na-amalite site na gburugburu ha. Ma agwaetiti a, site na ụkwụ, na-enwe mmetụta. Ọ sịrị, "Ruo ugbu a,"
“Anyị bu n'uche emeghe A openIK
Imamoglu, n’ihu ụlọ akwụkwọ dị elu nke Pertevniyal na ogige nke ụlọ alakụba Valide Sultan dịka onye na-agafe agafe, Aksaray Underground Bazaar ebe a ga-enyocha ya. Citizensmụ amaala ndị hụrụ Imamoglu n'ọnụ ụzọ bazaa, ha nyere ndị isi ala ndị isi foto. Ka ọ dị ugbu a, Elif Akgül dị afọ 4 makụrụ Imamoğlu ogologo oge ma kpatara oge na-atọ ụtọ. Nlekọta ndị na-ere ahịa n'okpuruala na ndị ọrụ nka site na ifuru na aka Imamoglu, nwere ndị ha na ha nwere nzukọ obere oge. N'aha nke onye isi ala, Cemal Dadasınlıoğlu depụtara nsogbu ndị ahụ dịka ọpụpụ ahụ. Imamoglu kwuru, "Ajụjụ anyị bụ nke emeghe. Ihe ga - eme ga - anọdụ ala gwa gị okwu .. N'amaghị, ndị omenkà ahịa na ụmụ amaala emebighị arịrịọ foto ahụ.
Imamoglu na ndị nnọchianya ahụ, Aksaray Yenipakı ılọ Ọrụ Ọzọ ji ụkwụ. Metro A.Ş. İmamoğlu, onye ya na ndị ọrụ ya rụkọrọ ụka, mekwara nchọpụta na ik Yenikapı Security Monitoring Center giren, nke etinyere n'ọrụ 7 ọnwa gara aga. Onye na-esote onye isi ala na mpaghara Istanbul Ali Firat nyere Imamoglu ozi gbasara teknụzụ. Imamoglu mere ememe mmemme nke ndị ọrụ na etiti ahụ. Imamoglu, ndị ọrụ na mbido redio mere ememe ndị ezumike iji rute na redio. Ndị ọrụ na-a teaụ tii n'otu oche Semam'le Imamoglu'nun nwa dọọrọ uche. İmamoğlu gwara ndị na-enyere ya aka ka ha mee ọmụmụ ihe na nkwalite etiti ahụ, nke na-arụ ọrụ na elekere elekere 24.
NWAANYI-Nna-AH R AHOS AHOG
Imamoglu, na-ewere ndị ọrụ ọnụ foto ya na Yenikapi. Ka ọ na-agafe n'ime ngalaba onye ọkwọ ụgbọ ala, Imamoglu ji ọkwa dị mkpa mee mmemme nke ndị njem ahụ. Engersgbọ njem ndị ghọtara na Imamoglu nọ n'ụgbọ ahụ, kwụ n'ahịrị iji were foto ndị isi ala nke Foto. Semih soro nna ya guzoro ọtọ, Imamoglu, "can nwere ike ijide m," ka ọ kwara. Nzaghachi nna Imamoglu nyere nwa ya nwoke, “Oooo! Olu? Ọkpụ? ” Mkparịta ụka a n'etiti nna na nwa nwoke mere ka ndị nọ nso chịrị ọchị. Imamoglu, si n'ọdụ ụgbọ oloko ahụ dị na ọdụ ụgbọ okporo ígwè Hali,, hụrụ ọdụ ụgbọ mmiri nke akụkọ ihe mere eme si na mbara ikuku hụrụ n'okporo ụzọ Haliç Metro Bridge. Imamoglu, ihe aga-eme na mbu banyere mpaghara ahụ, kesara ndị na-enyere ya aka. Mgbe ule nyocha ahụ gasịrị, Imamoglu banyere ụgbọ oloko wee pụọ gaa Şişhane. Imamoglu mere oriri nke ụmụ amaala na ụgbọ okporo igwe mmadụ juru ma buru ọtụtụ foto. Semih nyekwaara nna ya aka iwere foto na ụmụ amaala. Amomụ amaala gbara obodo Imamoglu site na Shane ruo Tunel. Imamoglu na-awagharị n'okporo ụzọ nke okporo mmiri nwa oge, gere ntị na mkpesa nke ndị ọrụ aka.
Mayor İmamoğlu na-enyocha owuwu nke Kabataş Mahmutbey Metro Line 07 / 08 / 2019 Onye isi ala remBB Ekrem İmamoğlu kwagara Kabataş mgbe nyochachara ya na ndagwurugwu ndụ ọhụrụ na Tuzla. "Seagull Project" na Kabatas - Mahmutbey ụzọ ụgbọ oloko na-ewu nke nyocha Imamoglu, mbụ Kabatas - Uskudar ugbo ala, na Kabatas - Taksim funicular line zutere ụmụ amaala. Imamoglu, ihe iji ya Istanbulkart'ın nke ya dọtara uche. Onye isi obodo Metropolitan (IMM) Onye isi ala Ekrem Imamoglu, Tuzla Aydınlı nke dị na ndagwurugwu nke ọrụ ahụ ghọrọ ndagwurugwu dị ndụ mgbe arụchara ọrụ na Hacet Creek, na-eku ume, ya na uzuzu nke ụkwụ ya na-ewu ebe a na-ewu “Seagull Project”. N'ime oke nchekwa ọrụ, akpụkpọ ụkwụ pụrụ iche, akwa na okpu agha bulunan
Na Bursaray, Kestel ghọrọ district nke Bursa 17 / 08 / 2017 Bursa Mayor Recep Altepe, Kestelli zutere ndị isi na nzukọ ahụ, otu n'ime ógbè kasị elu na-emepe emepe nke Kestel, na njem ụgbọ njem nke Bursa, na-enye njem. Kestel Mayor Yener Acar, 28I obodo ahụ ghọrọ ngụkọta nke usoro 35 dum na ụlọ ọrụ nnukwu ụlọ, site na egwuregwu gaa na akụkọ ihe mere eme nke ụdị ọrụ ọ bụla siri ike. Mayor Recep Altepe zutere ndị isi nke Kestel district na Dobruca Social Facilities. Mayor nke Kestel Yener Acar na-esonye nzukọ ma nye ozi banyere ọrụ Kestel na-enye
Okirikiri ala ahụ abanyela na mmiri ọhụrụ ya 15 / 12 / 2014 Uzo ala ahuru uzo ohuru ohuru: Ogidi nkume nke mebiri emebi na mpaghara Taşköprü, ebe ugbo ala abuo enweghi ike igabiga n'otu oge, ndi obodo bibiere ya na ebe ozo di okpukpu abuo. Ejiri 1 nde 200 puku TL nọrọ n'elu mmiri, nke e mechara wuchaa. N'ikwu okwu na mmeghe, Mayor nke Osmangazi Mustafa Dündar kwuru na ọrụ ndị a agaghị agwụ agwụ, sị, la Na ọrụ ndị anyị malitere n'oge ikpeazụ, anyị na-aga n'ihu na ọrụ ndị a. Ọrụ chọrọ continuity. Anyị na-aga n'ihu ọrụ a anyị malitere n'emebughị nkwado gị. Echere m ihe a ga-eme na mpaghara Taşköprü mara mma. Ekwuru m na anyị nwere ike ime ka nkume ahụ ghọọ akwa akwa. New ...
Nnyocha IJT nke Mayor Dogan YHT nwere ike ịchọta 11 / 12 / 2012 Nnyocha Mayor Mayet nke Domit Investigated YHT Studies Mayor nke Izmit Nevzat Dogan, Ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ ọsọ na-agba ọsọ na-agba ọsọ (YHT) na-enyocha ọrụ ụzọ. Ịga n'ógbè ahụ na onye isi oche obodo Mustafa Yaman President Dogan Dogan hụrụ ọrụ ahụ, soro ụmụ amaala kwurịta okwu. Ndị bi n'ógbè Cumhuriyet kwupụtara nsogbu ha nye President Doğan ma kwuo, sị, çalışma Na-arụ ọrụ ruo mgbe chi bọrọ. Nke a na-ewute anyị .. Dogan kwuru na ọ ga-enwe mmasị na ụkọ ụmụ amaala. Isi: www.haberx.com
Nnyocha IJT nke Mayor Dogan YHT nwere ike ịchọta 25 / 01 / 2013 Izmit Mayor Dogan Yht Na-achọ Nkwekọrịta Ọrụ Ike Mayor Nevzat Dogan, Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọdịdị Dị Elu (YHT) na ọmụmụ ihe ebe a nyochare Republican. Dogan, kwuru na nkwupụta ebe a, arụ ọrụ nke Obodo Izmit adịghị arụ ọrụ n'ime ikike ahụ, YHT Project bụ ọrụ dị oke mkpa na mpaghara ahụ, kwuru na akụkọ ihe mere eme, o kwuru. Dogan kwuru na oru zuru oke nwere ike iweta nsogbu na ọrụ ndị dị ndụ, nakwa na ụmụ amaala nwere nsogbu n'ihi ọrụ ndị a kwa ụbọchị ma ha mere nkatọ ziri ezi. Ọ bụ ezie na Dogan adịghị n'okpuru ọrụ Izmit Municipality, ọrụ ndị ahụ adịghị ngwa ma kpatara mmetọ gburugburu ebe obibi.
President Uysal bụ IMM nyochaa ihe omume na-aga n'ihu na Kagithane 23 / 01 / 2018 Istanbul Metricolitan Mayor Mevlüt Uysal zutere Mayor Fazlı Kılıç iji nyochaa ihe omume ugbu a na usoro okwu ọhụrụ na Kağıthane. Mayor nke Istanbul Metropolitan Municipality Mevlüt Uysal na ndị otu ya bịara Kağıthane Municipality Nurtepe Social Facilities ma gbanwee echiche banyere ọrụ ugbu a na nke ọhụrụ na Kağıthane. Mayor Mevlüt Uysal, onye natara ozi banyere ọrụ nke obodo, kelere Mayor nke Kağıthane Fazlı Kılıç na ndị otu maka ọrụ ha. Mayor Uysal Kabataş-Kağıthane-Mahmutbey Subway, Gayrettepe-3. Ụzọ ụgbọ oloko na ụgbọ mmiri na Cendere Valley Arrangement Project. Ihe nkwado nke 2019 ga-emecha site n'ịjụ otu onye ...
ATO President, Bozankayan's Local Metro Tools Nyocha 01 / 02 / 2018 Ankara Chamber of Commerce (ATO) onyeisi oche Gursel Baran, Turkey mbụ anụ ụlọ mmepụta nke Metro ugbo ala malite ATO nọ Bozankaya, gara osisi na Xinjiang. Metro ngwaọrụ Baran ọmụma banyere ebe, "Turkey mbụ domestically arụpụtara ụzọ ụgbọ ụgbọala Ankara na anyị bụ ndị mpako na-a so na ATO ụlọ ọrụ aku ya," ka o kwuru. N'oge nleta ya, otu onye isi oche nke ATO bụ Mustafa Deryal, onye otu onyeisi oche Selahattin Karaoğlan, onye isi oche nke Special Commission on Contribution and Commercial Cooperation in Procurement Procurement, Musa Pireci, Onye isi oche onyeisi oche Mehmet Kına na nzuko omeiwu Nu Nu Acar. ATO President ...
Magazin Kartepe na-enyocha ọrụ ụzọ 24 / 05 / 2014 Kartepe Mayor Üzülmez nyochare ọrụ okporo ụzọ: Kartepe Mayor Hüseyin Üzülmez nyochare ọrụ nlekota akwara ndị e ji arụ ọrụ n'ime usoro ọrụ mmezi okporo ụzọ na saịtị. Iji nye usoro nchekwa okporo ụzọ na nchekwa na ụzọ ndị dị n'okporo ụzọ dị na Kartepe, e guzobere nchịkọta nchịkọta na Ataşehir Neighborhood dị ka ogidi ọrụ mmezi okporo ụzọ. Kartepe Mayor Hüseyin Üzülmez, bụ onye jikọtara ọrụ ndị ahụ, wee nyochaa ọrụ ubi na saịtị n'oge oge ezumike ụbọchị 3. Mayor Üzülmez, onye na-arụ ọrụ na agbata obi ma hụ ebe ọhụụ na-arụ ọrụ ndị na-emegharị okporo ụzọ, gwara ndị otu nyochara nchịkọta ngwongwo na mpaghara Ataşehir ...
A na-enyocha onyeisi BTS ma dọọ aka ná ntị na ịberede ụgbọ okporo ígwè na saịtị 11 / 07 / 2018 Hasan Bektaş, onyeisi oche nke Union of Trade Unions (KESK), gara mpaghara ebe ọdachi ahụ mere na 24. Atụmatụ Bektaş na ịdọ aka ná ntị banyere ọdachi kpatara bụ: Ma mmiri ozuzo bụ ihe n'ụwa nile. Enwere ihe na-aga ebe ahụ. Iju Mmiri na-agafe n'ala ala ahụ. Idei mmiri na-adọkpụ nkume anyị na-akpọ ballast n'okpuru okporo ígwè. Ọ na-eme ka ụgbọ okporo ígwè ahụ rachie. Mgbe locomotive gafere, a na-akwagharị ụgbọala ndị ahụ. - Ndị 'nchebe okporo ụzọ' nọ n'okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè. Onye ọ bụla 'na-eche nche' ya
Bafra Mayor Sahin Eji Nyocha Ụlọ Nchọpụta 11 / 03 / 2015 Bafra Mayor Sahin Echere Ụlọ Nkume Ụlọ Nchọpụta Nchọpụta: Ejiri ọrụ ndị e ji esi nri na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ ndị mebiri emebi n'ihi ọrụ gas. Nnyocha gara aga na mpaghara Gazipaşa nọgidere na mpaghara Kızılırmak. Bafra Mayor Zihni Şahin gara ụlọ ọrụ dị na Nkume Nkume na Nkịtị na-echekwa site na ịga ụlọ ọrụ. Deputy Mayor Hüseyin Çamaş gara nlele ahụ. President Sahin gbasoro ọrụ na-aga n'ihu na ngalaba Kızılırmak. A malitere ịrụ ọrụ na-eme ka a na-emepụta ihe ndị e ji esi nri na-aga n'okporo ụzọ ndị mebiri emebi n'ihi ọrụ gas. Nnyocha gara aga na mpaghara Gazipaşa nọgidere na mpaghara Kızılırmak. Mere ...
Aksaray Underground Bazaar
Ụlọ ọdụ ụgbọ mmiri
Mosquelọ alakụba Valide
Yenikapı Security Monitor Center
Stationzọ ụgbọ oloko Yenipakı
Ationgbọ njem na-echere ụmụ amaala ihe ndị ha nwere
Mayor İmamoğlu na-enyocha owuwu nke Kabataş Mahmutbey Metro Line
Na Bursaray, Kestel ghọrọ district nke Bursa
Okirikiri ala ahụ abanyela na mmiri ọhụrụ ya
Nnyocha IJT nke Mayor Dogan YHT nwere ike ịchọta
President Uysal bụ IMM nyochaa ihe omume na-aga n'ihu na Kagithane
Magazin Kartepe na-enyocha ọrụ ụzọ
A na-enyocha onyeisi BTS ma dọọ aka ná ntị na ịberede ụgbọ okporo ígwè na saịtị
Bafra Mayor Sahin Eji Nyocha Ụlọ Nchọpụta
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa August 2019 (304) July 2019 (636) June 2019 (503) Mee 2019 (525) April 2019 (418) March 2019 (520) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (436) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (580) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (555) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (494) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (541) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (536) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (770) September 2014 (598) August 2014 (809) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (831) September 2012 (886) August 2012 (976) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)